Calaamado Cajiib Ah Oo Lagu Garto Marka Aay Gacalisadaada Ku Nacdo Ama Aaysan Danba Kaa Laheyn - iftineducation.com
iftineducation.com – Inta badan lamaanuhu marka ay xariirka haasaawaha sameynayaan waxaa soo kala dhex gala xiiso dhamaada , isku dhac ka yimaad labada dhinac , farxad la’aan soo wajahda iyo waxyaabo kaloo badan. Hadbaa Lamaantaada kolka kaa xiiso dhigto waxa aad ku dareemi kartaa 3 arimood kuwaasoo si bareer ah aad uga arki doonto dabeecadaheeda kusoo kordhay.
1) Waxaa is badalaya Waqtiga , fursadii faraha badneed oo ay gabadhu ku heysay iyadoona ku masa bidaneysa walaalo wax hebel ayaa igu soo kordhay waxaan rabaa inaan arimo badan qabsado walaalo waan mashquulayaa ha iga xumaan & waxyaabo lamid ah Markii hore si walbo oo ay gabadhu u mashquusho kama aysan mashquuli jirin kulankiina waqti qaadashadiina wax walbo waxa ay ka hor marin jirtay danihiina.
2) Mararka aad wacdo kama jawaabayso Taleefanka iyadoona beri kolkaad is aragtaan kuugu jawaabaysa walaalo waan mashquulsanaa waan ka maqnaa , ma maqleynin codkaa ka xirnaa , Balse waqtigii ay qiimaha kuu heysay hadii ay arki weyso wicitaankaaga durba iyadaa kugu soo celin jirtay kaaga raali galineysay.
3) Tan ugu danbeyso ee lagu garto in Gacalisadaadu kaa xiiso dhigttay waa Muran & Dacwo joogta ah iyadoona ka xanaaqda waxyaabo sahal ah ee waqtiyadii hore waxba u arki jirin , waxa ay mar walbo isku daydaa ineey qalad kugu raadiso si ay xariirkiina usoo afjarto. Hadaba Maxaa kula gudboon markii aad ku aragto Dhaqamadaas Gabadha aad wada socotaan , Shabakada Allsiyaasad.com ayaa ku siineysa talooyin aad uga gudbi karto Buundadaas liiq liiqanayso.
Xiriir Kastoo Jaceyl ah Waxaa Lagama Maarmaan U ah In Laga Helo Labadaan Arimood..